I-SILGRANIT SINK PROS KUNYE NE-CONS (UYILO KUNYE NESIKHOKELO SOKUTHENGA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Silgranit Sink Pros kunye ne-Cons (Uyilo kunye nesikhokelo sokuthenga)
I-Silgranit Sink Pros kunye ne-Cons (Uyilo kunye nesikhokelo sokuthenga)
Wamkelekile kwisilgranit isink pros kunye ne-cons yokuthenga isikhokelo kubandakanya ukuba yintoni, iindlela zoyilo, imibala, amaxabiso kunye neengcebiso zokugcina. Enye yezona zinto zisetyenziswayo kwikhaya isinki. Nokuba kusekhitshini, kwindawo yokuhlamba okanye kwigumbi lokuhlambela, isinki iphantsi kwemisebenzi yemihla ngemihla kwaye ihlala ivezwa ukufuma, ibhaktiriya kunye nokunxibelelana nezinto ezahlukeneyo. Ngenxa yoko, kubalulekile ukuba ukhethe izinto ezinokuthenjwa ezinokuma ekuhambeni kwexesha.
iilokhwe zomtshato ezingamhlophe
Zininzi izinto onokukhetha kuzo kwizinto zokuntywila kwiimarike ezinje ngesinki eyakhiwe ngentsimbi engenasici, isinki enomtsalane ye-porcelain kunye neesink ezidityanisiweyo. Eyokugqibela iyaqhubeka nokunyuka ngokuthandwa kule mihla ngenxa yezibonelelo ezibonakalayo abazinikelayo.
Kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo zokuntywila kwegranite kwimarike, iSilgranit yenye yezona zinto zilungileyo unokuzifumana. Kule nqaku, sijonga enye yeesinki ezinokuthenjwa kwimarike- iBlanco Silgranit sink. Funda ukuze wazi iingenelo kunye neengozi zokukhetha isinki.
Yintoni iSilgranit Sink?
I-Silgranit itshona emhlophe
Iinkonzo zeSilgranit Zinc
Umzi weSinki weSilgranit
Imibala yeSink emhlophe yeSilgranit
Amaxabiso eSinki amhlophe eSilgranit
Izitayile zeSilgranit Zinc
Uyibuyisela njani i-Silgranit Sink
Imikrwelo yeSink emhlophe yeSilgranit
Ngaba iSilgranit Sinks ilungile
Isinki yeSilgranit luhlobo lwesinki olwenziwe nguBlanco-oyena mvelisi mkhulu wezinto zokuntywila eJamani kunye nomnye wabavelisi abaphambili begranite, igranite efana nesinki edityanisiweyo emhlabeni. I-Silgranit yinto edityanisiweyo eyenziwe ngama-80% egranite yendalo-enye yezona zimbiwa zinzima emhlabeni.
Izilingi zeSilgranit ziveliswa ngokubopha igranite yomhlaba ecolekileyo enebanga eliphezulu le-acrylic eyenziweyo kwindlu nguBlanco. Imibala iyongezwa ke kumxube ukuqinisekisa umbala wesinki unqumle ngaphakathi. Imveliso e iphoswa ngokungagalelwanga kunye ukuyinika amandla
Yintoni ebangela ukuba iSilgranit isinki ukuba yomelele kwaye inzima yindlela ezakhiwe ngayo kunye nenkqubo yazo engqongqo kunye ngqo nemveliso
UBlanco uphethe amalungelo awodwa omenzi wechiza eSilgranit. Baye kwishishini ngaphezulu kweminyaka engama-30 kwaye kuphela komvelisi weSilgranit sinks, eyenza ukuba ibe kuphela kohlobo lwayo emhlabeni.
Isinki zeBlanco Silgranit ziza ngeendlela ezahlukeneyo, iintlobo, ubungakanani kunye nemibala. Ziveliswe kwimibala eyahlukeneyo e-9 ephefumlelweyo yendalo kwaye zinikezelwa kwiiqoqo ezisibhozo ezahlukeneyo ezibandakanya izitya zangoku kunye nezokuhlaziywa kweefama zasendlini.
Nazi ezinye zezibonelelo ezilungileyo eziza ne-Blanco Silgranit sink:
● Iyahlala kwaye inokumelana nokunxiba kunye nokuqhekeka kwemihla ngemihla . I-Silgranit yimveliso eyomeleleyo kakhulu kwaye yendalo inzima. Kuyinto enganyangekiyo ngokwemvelo kuninzi lweengozi onokuzifumana ekhitshini kwaye ayinakonakala ngokulula. Xa kuziwa kubomi bayo, lindela ukuba ihlale iminyaka, ukuba igcinwe ngokufanelekileyo.
● Ayithethi kwaye ayikrwabi Isinki zeBlanco Silgranit zinzima njengelitye kuba nangona zizinto ezidityanisiweyo, zenziwe ngegranite yendalo engama-80%.
Isinki zeSilgranit ngokwendalo ziyamelana nokuthumela kunye nokukrwela ao akufuneki ukhathazeke ngeempembelelo zequbuliso ezibangelwa zizinto eziwayo. Ukuba ulahla isitya sekhitshi sentsimbi kuyo, ayisayi kushiya phawu. Unokusika izithako kumphezulu wayo kwaye awuyi konakala kuwo.
● Ukumelana namabala kwaye ayizukurusa -Isinki zeBlanco Silgranit nazo ziyanyangeka. Zibambelele kakuhle kwizinto ezineasidi kunye nolunye uhlobo lolwelo. I-Silgranit nayo ayinayo nayiphi na into enokubangela umhlwa.
● Ubushushu Resistant -I-Silgranit isinki yobushushu enganyangekiyo kwaye ingadlula kubushushu obuqhelekileyo bokubhaka kunye nokubilisa. Banokunyamezela ukuya kuthi ga kwi-280 ° C okanye kwi-536 ° F kunye nokuvezwa kweepani ezishushu kunye neembiza azizukuchaphazela ukuzinza kwazo okanye zonakalise umphezulu wazo. Ungasifaka ngokuthe ngqo isitya esishushu sokubhaka ngaphandle kokukhathazeka ngemicimbi yokuqhekeka. Kwangokunjalo, ukuba amanzi abilayo abetha umphezulu wawo, ngekhe kubekho manzi asisigxina okanye aphelayo.
● Kulula ukucoceka nokugcina -Silgranit sinks kulula kakhulu ukuyigcina xa kuthelekiswa nezinye izinto. Ukuyigcina icocekile kulula ngoba ayifuni michiza ikhethekileyo okanye izinto ezingacociyo ezirhabaxa. Ukucoca imihla ngemihla kunokwenziwa kusetyenziswa ilaphu elithambileyo nangokuzisula.
Kulula kwakhona ukugcina isinki yeSigranit xa kuthelekiswa nokuntywila kwendalo kwegranite. Nge-Silgranit, umgubo wegranite utywinwe ngee-resins, ngenxa yoko akukho songelo kulwelo olungena kumphezulu wawo.
● Ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, imibala kunye nokugqitywa -Iisilgranit sinks ziyafumaneka kubungakanani obahlukeneyo, ukugqitywa kunye nezitayile. IBLANCO ivelisa ngaphezulu kwezitayile ezingama-30 zezi sinki kwimibala engama-8 enjengombala omnyama, omhlophe, ongwevu kunye nomdaka.
Ngenxa yokhetho oluninzi olukhoyo, kulula ukukhetha isinki eya kulungela ikhitshi lakho, ukongeza kuluhlu olubanzi lwemveliso, imibala yeesilgranit sinks nayo iyahambelana ngakumbi xa ithelekiswa negranite yendalo apho islabs zinokwahluka. Izilingi zeSilganit ziphoswa ngokungagalelwanga ngokombala ukuze umbala wazo uhambelane kuyo yonke imveliso.
● Antibacterial kunye nococeko -Silgranit sinks have a patent Hygienic + Plus surface protection formula - ikhaka lokuzikhusela eliyilelwe ukukhusela kunye nokunciphisa ukukhula kwebhaktiriya ukuya kuthi ga kwi-98%. Oku kuyenza icoceke ngokupheleleyo kwaye ikhuseleke ngokugqibeleleyo ekunxibelelaneni nokutya.
● Ayizukuphela okanye idibane ngokuhamba kwexesha -Kuba ngenxa yokugqitha kunye nangombala weSilgranit sinks, awapheli. Ukunxiba kwemihla ngemihla akuyi kubangela naluphi na utshintsho kumbala wayo. Nokuba ibekwe kwilanga elithe ngqo, ayizukujika umbala, eyenza ukuba ilungele ukusetyenziswa kwangaphandle.
● Inketho elula Isinki zeSilgranit zilula ngokuthelekiswa nentsimbi esemgangathweni kunye neesinki zegranite zendalo. Ukuphatha lo mbandela kulula kakhulu kwaye kwenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokuntywila kumgxobhozo. Kuba zilula, iiSilgranit sinks zikwindlela efanelekileyo yokufaka i-DIY.
● Unobume kunye nobuhle belitye lendalo okanye igranite -Ukuba ufuna isinki ekhangeleka ngathi yeyokwenyani, kodwa ufuna ukugcina kwiindleko, izitya zeSilgranit lolunye lolona khetho lufanelekileyo kwintengiso.
Nangona iSilgranit isinki isebenzisa igranite eyimpuphu, ubuhle bendalo obuza neli litye buyagcinwa. Ke ikunika inketho ye-wink ebumnandi enovakalelo lwelitye lendalo, thabatha ubungozi obuza nayo.
● Igranite edityanisiweyo ibiza ixabiso eliphantsi kunegranite yokwenyani -Ukuba kukho iindlela ezininzi zokuntywila ezinamaxabiso aphantsi kuneSilgranit, ngokubanzi, isabiza kakhulu kunegranite yendalo.
Ukunyaniseka kwegranite yenyani kuxabisa malunga ne-1000 yeedola ukuya kuthi ga kwi-5000 yeedola, kuxhomekeka kwinani lezinto. Isilgranit isinks ibiza ixabiso eliphantsi kwi-350 ukuya kwi-500 yeedola kuyilo lokungena kwinqanaba kunye nokubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nezibonelelo ezifanelekileyo xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokuntywila. Namhlanje Isiqithi sasekhitshini esinki nguBlanco Silgranit.
Nazi ezinye zeengxaki zokuba nesinki yeBlanco Silgranit:
● Ngokubanzi, iisinki zeSilgranit zibiza kakhulu kunezinye iintlobo zokuntywila -Nakuba kubiza ixabiso eliphantsi kune-granite yendalo esinki, lindela ukuhlawula ngakumbi isinki yeSilgranit.
Njengoko besesitshilo, isinki esisiseko seSilgranit inokuxabisa malunga ne- $ 350 ukuya kwi-500 yeedola ukuba uyifaka ngokwakho-ezinye iindlela zokuntywila, ezinje ngesinki esemgangathweni engenazintsimbi inokuthengwa ngexabiso eliphantsi njenge- $ 50 kwiivenkile zekhaya zehardware nakwiDepho yasekhaya. Bona Okuninzi iintlobo zeesinki zasekhitshini Apha.
● Iidiphozithi zeLimescale kunokuba nzima kakhulu ukuzisusa kwisinki yeSilgranit -Umphezulu wesinki weSilgranit unokunyamezela kwaye uphendule uninzi lwamabala angaphezulu kodwa uthambekele kwiidiphozithi zelimestale. Iidiphozithi zeLimescale zinokunciphisa isibheno kunye nobuhle besinki ekuhambeni kwexesha, ke kuya kufuneka ziqwalaselwe ngokukhawuleza ukuthintela ukufunxwa kolwelo.
● I-Silgranit ingonakaliswa ngamachiza athile anzima Isinki zeSilgranit ziyanyangeka ukuba zingcolise uninzi lwezinto kodwa kubalulekile ukulandela yonke imiyalelo ekhathalayo ecetyiswe ngumvelisi wayo ukuqinisekisa umgangatho wayo ophezulu.
Usuku lwezithandani izimvo zesipho somyeni
Iikhemikhali ezininzi ezinobungozi zinokonakalisa isinki njengee-abrasives, iichemical laden cleaner kunye ne-drain block block.
Jonga le Blanco Silgranit isink kwi cafe emdaka e Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Izilingi zeSilgranit zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zemibala esithoba, ubukhulu becala zingathathi hlangothi, ezisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo lwangaphakathi kunye neendlela. Le mibala kulula ukuyidibanisa kwaye ithelekise kwisithuba kwaye inokudibana ngokugqibeleleyo kunye nemiphezulu yeetafile zamatye zendalo kunye nezenziwe ngobunjineli.
Ngokungafaniyo negranite yesiko kunye neyinyani, iisinki zeSilgranit zinombala ohambelana ngakumbi kuyo yonke imveliso. Ngombala wabo ofanayo, ukujonga akunamthungo ngakumbi.
Nazi iindlela ezahlukeneyo zokhetho lombala ophefumlelweyo wendalo weBlanco Silgranit sinks:
● Ibhiskithi - ithambile, ikhrim emhlophe
● I-White-crisp, i-matte emhlophe emhlophe kunye namachokoza
● Amalahle amnyama -Amnyama amhlophe amhlophe agudileyo, agqityiweyo matte
● Ikhonkrithi Engwevu - Ikhonkrithi eluhlaza kunye namachokoza amdaka afudumeleyo
● Isilinda-Ngwevu emnyama ekugqityweni kwematte
● I-anthracite - Imnyama bumnyama kunye nokubengezela okufihlakeleyo kwemikhonto emhlophe
● I-Metallic Grey - Itoni ephakathi ipholile ngwevu zesilivere
● I-Truffle-ukukhanya kwe-taupe ekugqibeleni kwe-matte
● UCafe Brown-Ubushushu obunzulu obufudumeleyo
Ixabiso lesinki yeSilgranit iyahluka ngokuxhomekeka kubungakanani kunye nesitayile sayo, kodwa ngokomndilili, inqanaba lokungena lokuntywila libiza malunga ne-300 yeedola. Iindleko zinokubaleka kangange- $ 1200 kwiimodeli eziphezulu.
IBlanco ibonelela ngeSilgranit sinks ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obunokuxhasa nayiphi na into yoyilo lwangaphakathi- nokuba yeyesiko, yangoku, eyangoku okanye yoyilo lotshintsho. URondo kunye neValea.
Jonga le Blanco Silgranite indlu yasefama yanamhlanje isinki Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
● Indawo yaseFama yaseSilgranit - Indawo ekuhlalwa ngayo kwifama yasendlwini ithandwa kakhulu kuyilo lwekhitshi ngenxa yobuhle bayo beklasikhi kunye nomtsalane olula. UBlanco ubonelela ngohlobo lwabo oluhlaziyiweyo lwesitayile sendlu yefama edibanisa uyilo lwesiko kunye nezinto zangoku. Iindawo zabo zokuntywila ezindlwini ziyinxalenye yengqokelela yeVINTERA kunye neIKON.
Isinki zeVintera ziza zombini izitya ezizodwa kunye nezitya eziphindwe kabini ezinoyilo olusezantsi. Izikeki ze-Ikon ziyafumaneka ngokufanayo kuyilo olunye kunye nokuphinda kabini isitya, kodwa zinobungakanani obahlukeneyo kathathu. Bomvu ngakumbi malunga isinki engatshatanga yokuphinda kabini Apha.
● IBlanco Silgranit yehlisa ukuntywila -I-Silgranit sinks lolunye lolona khetho unokukhetha kulo ukuba ufuna isinki yokujongela phantsi. Ngenxa yobunzima babo, ukufakwa kulula. I-Silgranit yokujongela phantsi iisinki ziyinxalenye yengqokelela yePrecis, iPerforma kunye neValea.
● IBlanco Silgranit Kabini isitya esisezantsi sokuntywila -Iimodeli ezininzi zesinki zeIlgranit zinezitya eziphindwe kabini ezenza ukusebenza ekhitshini kusebenze ngakumbi. Banikezelwa kukhetho olwahlulayo olusezantsi olunika lula ngakumbi xa usebenzisa isinki.
● Isinki yokuhlamba impahla iBlanco Liven Silgranit -Enye yeemodeli ezizezona zibalaseleyo kwilayini yemveliso yeBlanco Silgranit sisinki yokuhlamba iLynn. Le yi-intshi ye-12 intshi enzulu yokuntywila edibanisa ukubonelela ngokuzinza, ukomelela kunye nokusebenza. I-WIth uyilo olusebenzayo loyesthetics kunye noyilo oluhle kakhulu, unokwenza ngokulula naliphi na igumbi lokuhlamba iimpahla ukuba lisebenze nangokunje.
Enye yeenzuzo ezilungileyo eziza nesilgranit isink kukugcina kwayo ngokukhululekileyo. Ngokubanzi, iisinki zeSilgranit kulula ukuzicoca kwaye ziya kufuna umgudu omncinci kakhulu.
Izinto ezisisiseko ozifunayo zokucoca imihla ngemihla zibandakanya ilaphu le-microfiber ethambileyo, isitya esinesitya esincinci okanye ijeli yokuhlamba kunye namanzi.
ukukhanya kwelayili ekhitshini
● Ukucocwa kwarhoqo - Ukucocwa kwendlela yokususa nakuphi na ukungcola kokutya kufuna ukuba kusetyenziswe imichiza erhabaxa, kodwa endaweni yoko yonke into oyifunayo ayinaso isicoci esirhabaxa njengesicocisi esinesitya, amanye amanzi kunye nelaphu elithambileyo okanye isiponji. Sula nje isinki yakho ngelaphu kunye nesepha yokuhlamba isitya emva koko uyihlambe ngamanzi.
IBlanco ikwacoca nayo, iBlancoclean Composite Cleanser, ekhuthazwayo ukuba isetyenziselwe iisinki ezinemibala ekhanyayo.
Unokusebenzisa isoda yokubhaka ulondolozo rhoqo lweesinki ezinemibala emnyama. Fafaza isoda yokubhaka kwisiponji okanye ilaphu uze uhlikihle isinki kancinci, coca amanzi kakuhle kwaye usule isinki eyomileyo.
Qiniseka ukuba wosula isinki sakho somile ngelaphu elithambileyo emva kwako konke ukusetyenziswa ukunqanda ukwakheka kweendawo zamanzi.
● Amacwecwe oMgangatho oLula- Ungasebenzisa kwakhona umxube wesicoci esincinci kunye namanzi ashushu ukususa amabala angaphezulu. Yosule ngokulula kumphezulu wokuntywila, uhlambe kakuhle kwaye usebenzise ilaphu ukosula owomileyo. Oku kuyakunceda ukubuyisela inkazimlo yesinki yakho.
● Ukucoca okunzulu-Ukucocwa okunzulu kweBasci kuyacetyiswa rhoqo kwiinyanga ezimbalwa. Okokuqala, susa nayiphi na inkunkuma okanye iidipozithi.
Vala idreyini yesinki yakho, emva koko ubeke ipowder yokuhlamba impahla ethambileyo okanye ijeli yokuhlamba kwisitya sakho. Gcwalisa isinki ngamanzi ashushu kwaye ushiye umxube ubuncinci iiyure ezimbini, kodwa ubusuku bhetele.
Ukucoca isisombululo kwaye uhlambe isitya sakho ngamanzi acocekileyo kwaye usule owomileyo ngelaphu le-microfiber elicocekileyo.
● Izinto ekufuneka uziphephe -Ukusetyenziswa kweekhemikhali ezininzi ekucoceni isinki yeSilgranit kunokuyiphelisa iwaranti yayo, ke qiniseka ukuba ulandela iileyibhile kunye nemiyalelo eza nayo.
USophie Turner joe jonas utshatile
Iwaranti ibandakanya ukuqhekeka, ukugoba kunye nokubhuza. Kulumkele ukusebenzisa izinto ezicocekileyo ezifana noboya bentsimbi, ukucoca imichiza ethintela ukucoca kunye nokuthintela nawuphi na umonakalo kwitshini yakho. Izicoci ezinochuku kunye neealkalis zorhwebo ezifana neammonia nazo azikukhuthazwa ukuba zisetyenziswe.
● Amabala aneenkani - Isinki ezinombala okhanyayo zeSilgranit zithande ukonakala kwaye kwimeko apho isinki yakho inamabala, ungayibuyisela kwakhona usebenzisa umxube weendawo ezilinganayo ze-chlorine bleach kunye namanzi.
Sula ngokulula isinki yakho ngomxube usebenzisa indwangu yokuthambisa okanye isiponji. Sukusebenzisa iblitshi ngqo kwisinki yakho njengoko oku kungonakalisa ukhuseleko lwayo.
Unokusebenzisa i-Blancoclean Composite Cleanser ukuphelisa naziphi na izinto eziqaqadekileyo.
● Iidiphozithi zeLimescale neCalcium- Nangona iSilrganit isinki inokubuyisa amabala angaphezulu, amanzi anzima anokushiya intsalela emhlophe esinkini. Ezi iidipozithi zelimestale zinokufunxa ulwelo kwaye zinokunciphisa ukubengezela kunye nokubhena kwesinki yakho ekuhambeni kwexesha, ke qiniseka ukuba uzilungisa kwangoko.
Ukususa i-limescale eyakhayo, uyakufuna iarhente yokwehlisa intengiso njenge-CLR (iCalcium Lime Rust) okanye iLime Away. Ezi mveliso zisetyenziselwa ukunyibilikisa amabala afana ne-lime, calcium kunye ne-iron oxide.
Faka isicelo searhente yokwehla kwimimandla ene-limescale emva koko mayiyeke ibile ubuncinci iiyure ezi-2. Hlamba isinki ngamanzi ashushu, sula usebenzisa isiponji esimanzi kwaye uqiniseke ukuba uyomisa kakuhle ngelaphu elithambileyo. Qiniseka ukuba ulandela imiyalelo xa usebenzisa ezi zinto zokucoca ukunqanda nawuphi na umonakalo.
Ngenye indlela, ungasebenzisa umxube weviniga emhlophe kunye namanzi ashushu. Faka umxube kwi-limescale eyakhayo kwaye uhlambe isinki kakuhle ngamanzi. Sula ukoma ngelaphu elithambileyo, nelicocekileyo.
● Ukubuyisela iLuster yesinki yakho yaseSilgranit - Ukuba isinki yakho yeSilgranit ayijongi njengokukhazimla njengokuba yayisenza, thambisa ioyile yezimbiwa kuyo usebenzisa ilaphu elicocekileyo elicocekileyo. Yosule ngobunono ide ibonakale ikhazimla kwakhona.
● Isepha Scum - Abanye abacoca i-cream bangashiya ifilimu emhlophe kwisinki emnyama yeSilgranit. Ukuba awuyikucoca isinki yakho ngokucokisekileyo, isepha inokwakha, kodwa oku kungasuswa ngokulula kusetyenziswa uMnu.
Faka isicelo esinkini yakho uze uyihlambe kakuhle ngesicoci esincinci kunye namanzi. Qinisekisa ukuba uyomile ngelaphu elicocekileyo elicocekileyo. Ukuba ufuna ukubuyisa i-sheen emnyama, ungafaka ioyile yamaminerali emva kokuba yome.
Isinki zeSilgranit zihlala ixesha elide kakhulu kwaye ziyamelana nemikrwelo. Ngamanye amaxesha, izinto zesinyithi okanye iimbiza zingashiya uphawu lwethutyana kumphezulu wesinki kwaye oku kunokukhutshwa ngokulula.
Kwiimpawu ze-scuff, sebenzisa isiponji esirhabaxa kwaye ufefe isoda yokubhaka kunye namanzi ashushu kwisinki sakho. Susa amanqaku ngobumnene ngesiponji esirhabaxa kwaye ziya kususwa kwangoko.
Ngokunikwa izibonelelo ezininzi kunye neempawu ezintle zesinki yeSilgranit, benza utyalomali olufanelekileyo kwikhaya lakho. Abalunganga kuphela, enyanisweni, bangcono kunezinye izinto kwintengiso.
I-Silgranit yenzelwe nje ukuba ibe nomtsalane ngobuhle, kodwa nokuba yomelele kwaye ibe lukhuni ngokwasendalweni - iimpawu ezifuneka kakhulu kwisinki ethembekileyo enokumelana nokunxiba kwemihla ngemihla nokusetyenziswa kwekhitshi enzima.
Ukufumana umxholo ofanayo ngakumbi jonga iphepha lethu kwi iintlobo zeefompo zasekhitshini Apha.
izimvo ezingafaniyo zemveli zokunxiba
Uluhlu lokuhlambela iindwendwe
izimvo zeqela le-bachelorette st louis
indlela yokubopha isaphetha seribhoni esifanelekileyo